Ihe oyiyi izizi nke BlackBerry DTEk60 ka edozichara | Akụkọ akụrụngwa
Ihe osise izizi nke BlackBerry DTEk60 na-edozi
Izu ole na ole gara aga BlackBerry kwupụtara na ọ na-agbahapụ mmepụta nke ọnụ ya site na imechi ngalaba R&D nke e mere ọdụ ụgbọ mmiri ahụ. Ọrịre dị ala nke naanị ụdị ya dị ugbu a, BlackBerry Priv, kpaliri mgbanwe a na-agbanwe ma site ugbu a gaa n'ihu ọ ga-abụ ndị ọzọ ga-elekọta nrụpụta ahụ na ikekwe mmebe ahụ. Ma mgbe ụbọchị ahụ ruru, ụlọ ọrụ Canada arụ ọrụ na ọdụ ọhụrụ abụọ iji gbalịa ịnye nhọrọ ndị ọrụ na-achọ BlackBerry n'etiti etiti, ihe kwusiri na enwere ike kemgbe emeputara BlackBerry Priv, ihe nlere nke biara na mpi ndi di elu ma di obere emeela ihe niile.
Otu n'ime ndị na-ekesa ngwaahịa BlackBerry, B&H, enweghị ike iguzogide obi ụtọ inwe ihe osise mbụ nke DTEK60 ọhụrụ ahụ ma mee ka ha gbasaa ngwa ngwa. N'ịnụ ọkụ n'obi ọ nweela ike B&H onye tụworo anya ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya na rue taa egosighi ịdị adị nke ọdụ ọhụrụ ahụ hapụ hapụ foto nke ngwaahịa ahụ.
Ọhụrụ BlackBerry ọnụ ga-achịkwa a Snapdragon 820, ọ ga-enwe 4 GB nke RAM n'ime, 32 GB nke nchekwa na 5,5-anụ ọhịa anụ ọhịa na 2560 × 1440 WQHD mkpebi. Na mpụga anyị na-ahụ igwefoto mpx 21 mpx, igwefoto n'ihu mpx 8 na njikọ USB-C. E nyere ozi a niile site na ndoputa peeji nke ụlọ ọrụ B&H a.
Ma Ihe kachasị adọrọ mmasị bụ ọnụahịa dị ka ọdụ a nwere, a price na dị ka B&H atọrọ $ 499. Ọ bụrụ na ọ bụ akpatre ikpeazụ price nke ọnụ, a Blackberry nwere ike ịbụ ezigbo ezigbo na-ere ákwà na ndị fọdụrụnụ nke afọ na akụkụ nke ọzọ. Ihe anyị na-amaghị bụ na ọnụnọ dị na ọdụ a, mana ọ bụrụ na ihe niile adịla njikere, ụlọ ọrụ Canada agaghị ewe ọtụtụ ụbọchị iji kwupụta ọkwa ọhụrụ a nke nwere ike bụrụ oge mgbanwe maka ụlọ ọrụ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Ihe osise izizi nke BlackBerry DTEk60 na-edozi
Norma Ramos kwuru dijo
Achọrọ m ịhụ ya ma gbalịa ya.
Zaghachi Norma Ramos
Otu n'ime ha masịrị m, ọ ga-amasịkwa m
Zaghachi Marina Becerra
Chukwu site na BlackBerry Dtek60 ga-abu ihe ekwenti Onwe m
Nokia ga-aga MWC 2017 Ọ ga - eweta ekwentị ọhụrụ ya?
FIFA Mobile 2017 dị maka iOS na gam akporo ngwaọrụ